ब्रदर्स ग्रिम र हंस क्रिश्चियन एन्डरसन द्वारा छोटो कथाहरूको अनमोल संस्करण वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, काल्पनिक, किताबहरु, युवा साहित्य, कथाहरू
तिनीहरू मेरो भान्जीहरूका लागि उपहार हुन्, तर मलाई लाग्छ उनीहरू उनीहरू पढी पढ्नेछन् जब तिनीहरू ठूला हुन्छन् र राम्रोसँग पढ्न सक्छन्। यसै बीच, उसकी काकी, जो म हुँ, पहिले नै यी मा खुशी छ ब्रदर्स ग्रिम र हंस क्रिश्चियन एन्डरसनले सबैभन्दा क्लासिक कथाहरूको बहुमूल्य संस्करणहरू। मैले महसुस गरेको आनन्द।
यी दुई संकलनहरूले पनि एक शानदार चयन समावेश गर्दछ १ to २० को दशकदेखि १ artists artists० को दशकका कलाकारहरूको ऐतिहासिक चित्रण। ती मध्येका पौराणिक र प्रतिष्ठित हुन् के निल्सेन पनि ब्रिटिश वाल्टर क्रेन, जाँदैछ ह्यारी क्लार्क, हेनरिक स्ट्रब, हर्बर्ट ल्युपिन वा लोटे रेनिगर, सिनेमाटोग्राफिक एनिमेसनको अग्रणी।
तिनीहरू हुन् सबै उमेर को पाठकहरूको लागी र प्रत्येकको सुरूमा त्यहाँ हुन्छ धेरै पूर्ण विश्लेषण सम्पादकबाट, नोएल डानियल, ग्रिम्स र एन्डरसनको जीवन र कार्यहरूमा। र ती लगभग विचार पनि गर्न सकिन्छ कला पुस्तकहरु.
जाकोब र विल्हेम ग्रिम fueron जर्मन शिक्षाविद् र भाषाविद्हरू जसले लोकप्रिय परिकथा र अन्य लोककथाहरू जम्मा गर्न वर्षौं बित्यो सिन्ड्रेला, स्नो व्हाइट y रापुन्जेल। परिणाम भन्दा बढी थियो २ stories कथाहरू, एक विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध कथाहरूको संग्रह, (यो भनिन्छ कि यो पहिले त्यहाँ बाइबल मात्र छ)। प्रभाव र प्रेरणा विगत र भविष्यका लेखकहरू, संगीतकारहरू, कलाकारहरू, र फिल्म निर्माताहरूका पुस्ताहरू सम्भव छ अनन्त.
चयनमा कथाहरू समावेश: फ्रुग कि or वा हेनरी आइरन, रापोनचिगो, हन्सेल र ग्रेटेल, बहादुर लिटिल टेलर, सिन्ड्रेला, श्रीमती होले, लिटिल रेड राइडिood हुड, स्लीपिंग ब्यूटी, स्नो व्हाइट, द जम्पिंग ड्वार्फ, स्टारफल, बुटमा पुस, सुनको हंस , बाह्र नाच राजकुमारीहरू.
अवश्य पनि छन् फिल्म अनुकूलन दुबै ब्रदर्स ग्रिम र एन्डरसनमा आधारित। सबैभन्दा भर्खरको, ब्रदर्स ग्रिमको रहस्य, को टेरी गिलियम (२०० 2005), सँग स्वास्थ्य लेजर र म्याट डमोन, जसले उनको कथालाई कथाको रूपमा जादुई र अँध्यारो जस्तो बनायो।
हान्स ईसाई एन्डरसन
«जीवन आफैंमा सब भन्दा अद्भुत परी कथा होPoss सम्भाव्य वाक्यांश मध्ये एक हो सबै समयको सबैभन्दा प्रसिद्ध डेनिस लेखक। एन्डरसन जन्म भएको थियो ओडिन्स, १1805०XNUMX मा नम्र मूल र एकान्त चरित्र, चाँडै नै एक महान कल्पना विकसित भयो। उनी कवि र नाटककार पनि थिए।
चयनमा कथाहरू समावेश: राजकुमारी र मटर, द नाइटिंगेल, द लिटिल मरमेड, सम्राटको नयाँ कपडाहरू, टिन सोल्जर, हिउँ क्वीन, कुरूप डकलिंग, टिन्डर लाइटर.
उसको सबैभन्दा सम्झिने फिल्म अनुकूलन हुन सक्छ कल्पित एन्डरसन, चार्ल्स भिडर द्वारा (१ 1952 XNUMX२), एक संगीत हो एक ड्यानी काए संग जसले डेनमार्कका लेखकहरू मध्ये एक प्रदर्शन गरे जसमा ती प्रदर्शन र चलचित्रहरू मध्ये एक हो कि यदि तपाईं उसलाई बच्चाको रूपमा देख्नु हुन्छ, तपाईं अब भुल्नुहुन्न। यो कुनै जीवनी होइन, तर एन्डरसनको बारेमा एक परीकथा हो र यो थियो एक अन्तर्राष्ट्रिय सफलता.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » ब्रदर्स ग्रिम र हंस क्रिश्चियन एन्डरसनले छोटो कथाको अनमोल संस्करणहरू
इन्ग्रिड ओजेडा भन्यो
हामी तिनीहरूलाई कहाँ खरीद गर्छौं?
Ingrid Ojeda लाई जवाफ दिनुहोस्
सम्भवतः कुनै पुस्तक पसल वा इन्टरनेटमा। वा टास्चेनको वेबसाइटमा, अवश्य।
मलाई लाग्छ कि यी अंशहरू मार्फत म पढ्दै छु